Ndụ onye sapiens gwara Neanderthal
Ọ ga-abụ site na mkparịta ụka nke na-agwa ndụ ... dị njikere ikwu maka njedebe ma ọ bụ enweghị njedebe nke ihe nkeonwe ha.
Site n'echiche a nke nwere ike ịpụta n'isi anyị site na aha, anyị na -abịa n'akwụkwọ kacha mma mgbe niile Juan Jose Millas.
Naanị oge a ka ọ na -eso Millás, Juan Luis Asuaga ọkachamara na fossil na akwụkwọ ya kacha dị oke egwu agbakwunyere na nkume. Yabụ na Neanderthal Sapiens na -eche ihu, klọb n'ala na uche ọhụrụ iji ghọta ihe na -eme na puku afọ gara aga na ihu ụwa a ...
Ruo ọtụtụ afọ, mmasị ịghọta ndụ, mmalite ya na mmalite ya na -adakwasị n'isi Juan José Millás, yabụ ọ malitere izute, ya na otu n'ime ndị ọkachamara kachasị na obodo a n'ọhịa, Juan Luis Arsuaga, gịnị kpatara anyị dị ka anyị dị na ihe dugara anyị ebe anyị nọ.
Ejikọtara amamihe nke ọkà mmụta ihe ọmụmụ n'akwụkwọ a yana nlebara anya na anya na ihe ijuanya nke onye dere ya nwere n'ezie. N'ihi na Millás bụ Neanderthal (ma ọ bụ ihe ọ na -ekwu), yana Arsuaga, n'anya ya, sapiens.
Ya mere, n'ime ọtụtụ ọnwa, ha abụọ gara ebe dị iche iche, ọtụtụ n'ime ha bụ ọnọdụ ndụ anyị kwa ụbọchị, na ndị ọzọ, ebe pụrụ iche ebe ị ka nwere ike ịhụ ụdị ihe anyị bụ, ebe anyị siri bịa.
N'ime ọpụpụ ndị a, nke nwere ike ichetara onye na -agụ nke Don Quixote na Sancho, ndị sapiens nwara ịkụziri Neanderthal otu esi eche echiche dị ka sapiens na, nke kachasị, na akụkọ mgbe ochie abụghị ihe gara aga: nzọ ụkwụ nke mmadụ. nke puku afọ nwere ike ịchọta ebe ọ bụla site n'ọgba ma ọ bụ odida obodo ruo ebe egwuregwu ma ọ bụ ụlọ ahịa anụmanụ juru. Ọ bụ ndụ na -akụ aka n'akwụkwọ a. Akụkọ kacha mma.
Ị nwere ike zụta akwụkwọ a ugbu a «Ndụ nke sapiens gwara Neanderthal», nke Juan José Millás dere, ebe a:
Tags Juan Jose Millás, Juan Luis Asuaga, Akwụkwọ ndị dị ugbu a, Akwụkwọ sayensị